Xisbiga Markel oo looga adkaaday doorasho goboleed - BBC News Somali
Xisbiga Markel oo looga adkaaday doorasho goboleed
Image caption Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Markel
Xisbiga haya talada dalka Jarmalka ee CDU ayaa la kulmay guuldarro weyn doorasho ka dhacday gobolka Mecklenburg-Western Pomerania ee ay ka soo jeedo hoggaamiyaha dalkaasi Angela Markel.
Xisbiga Markel ee CDU waxuu galay kaalinta saddexaad, waxaana ka adkaaday xisbiga ka soo horjeeda muhaajiriinta ee AFD.
Doorashadan ayaa loo arkaa in ay tijaabo dhab ah u tahay Markel iyo xisbigeeda, ka hor doorashada guud ee dalkaasi ka dhici doonta sanadka dambe, waxa ayna eersaneysaa siyaasaddeeda kku wajahan muhaajiriinta iyo dadka soo galootiga ah.
Muddo sanad ah ayay la hayd waan qaadi karnaa culeyska qaxootiga iyo muhaajiriinta balse wax ay u muuqata in dadka gobolkaasi iyo guud ahaan jarmalka oo dhan aysan ku qanacsanayn arrintaasi.
Sanadkii la soo dhaafay oo kaliya dalkaasi waxaa galay qaxooti ka badan hal milyan, balse waxaa sii kordhay nacaybka ka dhanka ah muhaajiriinta.
Xisbiga AFD oo saddex sano oo kaliya ajira, siyaasad ahaanna diidan muhaajiriinta iyo baaqyada ka dhanka islaamka ayaa soo jiitay dadka ka walaacsan dhaqanka dadka jarmalka ah iyo amniga gudaha dalkaasi.
Arrimahan ayaa sababay in xisbiga Christian Democrats ee Markel uu helo boqolkiiba 19 ilaa 20 codadkii la dhiibtay, waana natiijadii ugu xumeyd oo abid uu xisbigan ka helo gobolkan.
Dhaqaale ahaan, gobolkan Mecklenburg-Western Pomerania ayaa oo ku yaala waqooyi bari dalkaasi Jarmalka ayaa waxaa ku nool hal milyan iyo 600 oo kun oo qof, siyaasad ahaanna culeys sidaa ah ma lahan balse waa gobolka ay ka soo jeedo ee laga soo doortay baarlamaan ahaan.
Arrintani waxa ay waji gabax ku tahay Markel, oo mustaqbalkeeda siyaasadeed uu hadda mugdi ku jiro marka loo eego doorashadan.